यौ-न सन्तुष्टि लिने भन्दै युवकले यौ-नांग मै सिमीका गेडा छिराएपछि…. – Dailny NpNews
यौ-न सन्तुष्टि लिने भन्दै युवकले यौ-नांग मै सिमीका गेडा छिराएपछि….
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १९, २०७८ समय: १३:४२:४१
अमेरिकाका एक युवकले यौ-न सन्तुष्टिका लागि भनेर आफ्नो यो-नां’गमा सिमीका गेडा हालेपछि उनलाई अपत्कालिन अवस्थामा अस्पताल पुर्याउनु पर्ने स्थिति आयो। विर्यस्खलनका बेला सिमीको अनुभव गर्ने भनेर उनले आफ्नो यौ’नां-गभित्रको नली (युरेथ्रा) मा ६ ओटा सिमीका गेडा हाले। तर सिमीका गेडा भित्र नै अड्किएपछि उनलाई अस्पताल पुर्याइएको हो।
अमेरिकाको मिचिगनमा बस्ने ३० वर्षीय उक्त युवकको नाम भने खुलाइएको छैन। युरोलोजी केस रिपोर्ट नाम गरेको एक जर्नलमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार उक्त व्यक्तिले यस्तो काम पहिलो पटक भने गरेका हैनन्।
यो पटकको समस्या यो भयो कि उनले धेरै सङ्ख्यामा सिमीका गेडा भित्र हाले। विर्यस्खलको प्राकृतिक झट्काले नै सिमीका गेडाहरु बहिरा निकाल्न प्रायस गरेका उनको हरेक प्रयास असफल भएपछि उनी अस्पताल पुगेका थिए।
अस्पतालमा पनि निकै समय लगाएर कठिनाईका साथ डाक्टरहरुले उक्त मानिसको यो-नां’गबाट सिमीका गेडा बाहिर निकाल्न सफल भएका थिए। उपचार गर्नु अगाडी डाक्टरहरुले उनको यौ-नां’गको सिटी स्क्यान गर्दा नलीभित्र १५ मिलिमिटर साइजका ६ वटा सिमीका गेडा देखिएका थिए। यौनांग भित्र रहेका ६ ओटा गेडा मध्ये एउटा गेडा डाक्टरहरुले क्रिम लगाएर हातको मद्दतले नै बाहिर निकालेका थिए।
तर अन्य ५ ओटा गेडा भने त्यसरी निकाल्न नसकेपछि शल्यक्रिया नै गर्नु परेको हो। ती मध्ये ४ ओटा सिमीका गेडा उनको यौ’नां-गको बीच भागसम्मै पुगेका थिए भने एउटा त मुत्रथैलीभित्री छिरेको थियो। अहिले भने उक्त व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको डाक्टरहरुले बताएका छन्।